RAADADKII QOOMKII REER SAALAX |
RAADADKII QOOMKII REER SAALAX
W/Q;C/NAASIR GURAY MEECAADigasho,Qraallo Aqoon yahan Soomaal
Kitaabka Quraanka ah odhaahdiisu maahan mid la hadleysa meel madhan. Bal waa odhaah leh yool ay kula hadleyso guud ahaan aadamiga si ay u gaadhsiiso xaqiiqada ay noloshu ku dhisan tahay. Si gaar ah waxay ula hadleysaa intii sheegatay in ay rumeeyeen. Waa kitaab qofkii u dhega nuglaada, uu ka helayo laab daggan iyo nuur. Qofkii ka dhega adeygana wuxuu helayaa laab cidhiidhyoon iyo gudcur. Waa kitaab rumeyntiisa iyo raacistiisa lagu helo naf ay sharaf ka buuxdo, iyo kor nadiif ah. Taas oo cimrigeeda ku howlan wanaag, diideysa is dhex-yaac, la dagaalameysa wahsiga, noloshaada iyo fekerkaagaba mid dheelli-tiraya weeyi.
Noloshu waxay ku dhisan tahay xaq iyo xeerar, kuwaas oo jaangooyadeeda uu yeeshey Eebaha xaqa ah. Quraanku wuxuu ina barayaa, dabiicaddana ka muuqda, abuur walba oo kale ee aan aadamiga ahayn in uu si wanaagsan u hoggaansan yahay. Wuxuu qeyb ka qaataa isu dheelli-tirka socodsiinta nolosha. Aadamigu waa abuurka keliya oo ay ka suurowdo in uu la yimaado dhaqan mooryaannimo ah ee ka baxsan xeerka xaqa ah. Eebe (kor ahaaye) waxaa u caado ah, in ciddii xeerkiisa ka leexata uu ganaaxo, si uusan u halleyn socodka nolosha. Isla-markaas waxaa u caado ah in uusan ganaaxa kula soo deg-degin ee wakhti lagu waantoobo la siiyo. Wixii madax-adeyga sii wada, markaas in la qabto.
Waayaha nolosha waxaa soo marey reero badan oo lagu ganaaxay nolosha goosashada. Quraanka oo 1/3 kamid aayadihiisa ay yihiin sheeko-taariikheed, ayaa 2000 oo aayadood in kabadan wuxuu inooga waramayaa dhacdooyin tegey. Tusaale-dhig ayaanu u soo qaadaneynaa mid kamid ah taariikhaha filka waynee quraanka ku yimid. Reerka aanu halkan kaga sheekeeneyno waa qabiilo qooqdey oo xeerarkii Eebe (kor ahaaye) ku dur-durisey. Iyagu waxay kamid ahaayeen bulshooyinkii nolosha soo maray kuwoodii ugu il-baxsanaa, ugu hodan-sanaa, ugu xoog-waynaa, uguna qab-waynaa. Hadal ay ka tageen awoowayaashood ayuu quraanku ku sheegey suuradda Fusilat, aayaddeeda 15-aad:
Qabiilkan oo magaciisa la odhan jiray Thamuud, ayaa waxay ku dhaqnaayeen degaan lagu magacaabo Al-Xijr oo ku yaal waqooyiga dalka Boqortooyada Sacuudiga. Waxay u dhexeysaa labada magaalo ee ah Madiina iyo Tabuuk. 22 km. oo waqooyi-bari ah ayay magaalada Al-Calaa ka xigtaa. Degaanka reerkan wuxuu ahaa mid ku yaal meel istraateeji ah. Wuxuu u dhexeeyay dhul ay ku curteen saddex il-baxnimo (Masar, Ciraaq iyo Yaman). Isla-markaas wuxuu ahaa mid leh dooxooyin barwaaqo ah iyo waadiyo biyo badan, kuwaas oo ayan biyuhu ka go’in. Reer Thamuud waxaa ay magaca ka wataan awoowahood Thamuud, kaas oo ahaa ina Caamir ina Iram ina Saam ina Nuux.
Iyagu waxay ahaayeen kuwo xagga Eebe (kor ahaaye) looga nicmeeyey. Waxay hor-mood ka ahaayeen il-baxnimo fil wayn, taas oo da’ddeedu ku beegan tahay 3.000 oo sanno ch. Waxay u talin jireen qabaa’il badan oo degaanka kula dhaqnaa. Magaalo madax waxaa u ahayd degmo lagu magacaabo Madaa’in. Barwaaqo iyo berya-samaad ayay ku noolaayeen. Waxaa u dheeraa il-baxnimo ku saleysan aqoon iyo farsamo ay heleen oo ay nolosha u kaashanayeen. Waxay ahaayeen dad caafimaad qaba, oo jirkoodu uu xooggan yahay. Qofkoodu wuxuu jooggiisu ahaa 25 – 30 m. Waxaa la sheegaa in ay ahaayeen fir ka hadhay qabaa’ilkii reer Caad. Il-baxnimadii ay curiyeen reerkan, laguma sheegin kutubtii samada ka yimid ee quraanka ka horeeyey (Towraad iyo Injiil). Sidaas oo kale ayaa reerkan aanan laga hayn wax raad ah oo dhaafsiisan magacooda iyo inta uu quraanku ka sheegey. Suuradda Al-Najm, aayadaheeda 50-aad iyo 51-aad waxay inoo bidhaaminayaan sida loo tir-tirey qabiiladii reer Thamuud iyo qabiillo ay ka soo farcameen, iyaga iyo weliba wixii il-baxnimo ahaa oo ay ka tageen lala rogey. Waxay aayaduhu leeyihiin:
(Eebe – Isagu waa kii baab’iyay Caad. Iyo Thamuud ee maxaa ka hadhay)
Eebe (kor ahaaye), markii uu baabi’iyay qabiiladii Thamuud iyo wixii farsamo ahaa oo ay abyeen, qeyb agabkii kamid ah ayuu ka reebey, taas oo uu inoogu sheegey quraanka. Si ay u ahaato raad cibradeed iyo mid waano-qaadasho ayaa farsamadii reer Thamuud waxaa ka hadhay dhismayaalkii ay buuraha ka dhisi jireen. Sida uu quraanku inoo sheegey, iyagu waxay dhisan jireen guryo iyo qasriyo. Dhismaha guryahooda waxay la gaar ahaayeen dhismo sare oo buuraha ku naqshadeysan. Arin lala yaabo ayaa waxay tahay, reerka sidaas loo baabi’iyay in ay yihiin reerka keliya oo quraanka uu xusey in guryahoodii baaqi laga yeelayo si ay aadamiga cibrad ugu noqoto. Dhismaha guryahaasi dhinac waxay ka yihiin buurihii ay ku naqshadeeyeen, dhinaca kale waxay ka yihiin aqallo qurux badan oo dhismahooda si wanaagsan loo far-shaxmey. Quraanka marka lagu tilmaamayo guryahaas, ereyga loo adeegsadey wuxuu yahay Naxt (far-shaxan). Guryo kale oo ereygaas la raacshey, quraanka laguma sheegin.
Qadiyaddaas ayuu Saalax (n.d.a.) muddo la dhex-taagnaa reerkiisii. Wuxuu tusaale-dhig uga dhigey qabiiladii reer Caad ee awoowayaashood ahaa oo iyagu waddadan uga horeyey. Reer Caad qudhoodu waxay ahaayeen kuwo heystey nolol il-baxnimo iyo berya-samaad leh. Laakiin markii ay mooryaanoobeen, ayaa cadhadii Eebe (kor ahaaye) ku dhacdey. Saalax (n.d.a.) iyo reerkiisii waa ay is-mari waayeen. Madaxya-wayntii reerka waxay Saalax (n.d.a.) u sheegeen in ay ka raja-dhigeen, marba haddii uu hareer maray wixii uu tolku ku heshiiyay. Markaas ayaa Saalax (n.d.a.) waxaa ku kacay, dhamaan maangaableydii reerka. Waxaa ugu horeeyey dumarkii iyo caruurtii. Naag la yidhaahdo Cuneysa ina Quneym waxay lahayd afar gabdhood. Waxay u tagtay qooqaagii reerka ugu waynaa, kaas oo la odhan jiray Qaddaar ina Saalif ina Jandac. Waxay ku tidhi, haddii hasha Saalax iyo nirigteeda aad dishid, gabdhaheyga middii aad doonto qaado. Halkii ayuu ka direy sagaal kamid ah maangaableydii qabiilada. Waxay dileen hashii iyo nirigteedii. Bal waxay damceen in Saalax (n.d.a.) qudhiisa ay dilaan. Markaas ayaa waxaa u bilowdey ganaaxii Eebe (kor ahaaye), kaas oo ayan u helin awood iyo gargaar ay isaga-caabiyaan.
Aayadaha quraanka ah ee ka hadlaya sheekadan, dhamaantood waxay yihiin kuwo ku soo degey magaalada Maka, marka laga reebo aayadda 70-aad ee ku jirta suuradda Al-Towba, taas oo dul-mar ku sameeneysa magacyada 6 reerood oo ganaaxii Eebe (kor ahaaye) uu ku dhacay. Qabiiladii Qureysh, xilligaas waxay adeegihii suubanaa (naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaate) ula dhaqmeysey, si lamid ah sidii ay Thamuud ula dhaqantey Saalax (n.d.a.). Quraankuna, xeerarka uu ka waramayo waa xeerar caalami ah oo xilli walba waa ay taagan yihiin. Sidaa darteed, madax-adeyga ayaa looga digayay.
“ Guryahoodii waa kuwaas iyaga oo madhan (cidla ah) “
Naxwa ahaan, ereyga ah (تِلْكَ) waa xaraf loo adeegsado in lagu tilmaamo wax markaas kuu muuqanaya oo farta lagu fiiqo, (بُيُوتُهُمْ) waa aqalladoodii, (خَاوِيَةً) cidla aanan lagu nooleyn. Maadaama Quraanku uu yahay xeer Eebe (kor ahaaye) uu ugu tala-galay in aadamigu ku dhaqmo illaa qiyaamaha ka joogsado, ereyga tilmaamaha ah ee aayadda la socda, isna waa uu jirayaa weligiis illaa qiyaamuhu ka dhacayo. Guryahan leynoo tilmaamayo ayaa iyagana jiraya weligood illaa qiyaamuhu ka dhacayo. Taasina waxay dersi u tahay facaha aadamiga ee is-daba joogo.
Ummado badan oo la rogey ayuu quraanku inoo sheegey. Waxaa kamid ah qoomkii Luud, qoomkii Huud, qoomkii Shuceyb, qoomkii Nuux, iyo qoomkii Muuse. Inkasta oo ummad waliba ay lahayd il-baxnimo iyo dhismayaal, misana ma-jirin mid ay ka hadheen guryihii ay degganaayeen. Quraankana laguma sheegin arintan. Il-baxnimadii reer Fircoon oo qudheedu ahayd mid lahayd tayo sare iyo tabar xooggan, waxay ka tegeen dhismayaal mug wayn ee ahraamaadka ay kamid yihiin. Laakiin raadkii guryahoodii lama hayo. Agabka badan ee reerkaas laga dhaxlay, meelaha laga heley waa qubuurahoodii iyo meelihii ay ku cibaadeysan jireen. Reerka keliya oo aan Thamuud ahayn oo quraanku uu guryahoodii xusey waa reer Caad. Iyaguna quraanku wuxuu ka sheegey (فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ) oo macnaheedu tahay wax raad ah maka heysaan !.
Dhismayaashii reer Thamuud, sida uu quraanku inoo sheegey laba qeyb ayay ahaayeen. Qeyb dooxooyinka ayay ku yiileen oo waxay ahaayeen qasriyo, oo waa dhismaha la baabi’iyay. Qeybta kale waxay ahaayeen guryo ay ku naqshadeeyeen buuraha oo waa kuwa baaqiga laga dhigey. Sidaa darteed qasriyadii wax raad ah oo ka hadhay majiro. Laakiin guryihii leynoo tilmaamay baaqi ayay noqdeen. Afar aayadood oo meelo kala duwan quraanka kaga yimid ayaa ka war-bixin kooba naga siinaya guryaha reer Thamuud, gaar ahaan kuwa farsamada qurxoon oo baaqiga noqdey. Xogta aanu ka heleyno afarta aayadood, waxaa kaloo ku dahsoon oo ay inoo bidhaaminayaan, aqoon la xidhiidha bulsho-barad (social study). Waxay tahay marxalado afar ah oo ay mareyso il-banimo walba oo bulsho aadmi ah ay curiso. Sida ay marxaladuhu u kala horeeyaan, ayaa aayaduhuna ay u soo kala hor-degeen.
2) Marxaladda labaad ee il-baxnimadu waxay tahay, markii lagu guuleysto xasilinta arimihii nolosha saldhigga u ahaa, in markaas bulshadu ay ilaashato nabadgelyadeeda. Taasina waa xaalad xasilloon oo wal-wal nafta ah iyo rabshado muuqda aanan midna lahayn. Waa xaalad ay bulshadu, cadow dibadda ah ay ka nabad gashay, bulshaduna ay amaan kala heshay. Eebe (kor ahaaye) wuxuu inoo tilmaamayaa reer Thamuud in ay marxaladdaas gaadheen, iyada oo la tilmaamayo farsamadii naqshadeynta guryaha. Aayadda 82-aad ee suuradda Al-Xijr ayaa arintaas inoo tilmaameysa:
3) Marxaladda saddexaad waa marxaladda baashaalka iyo beryasamaadka. Marka ay bulshada barwaaqada ka badato, nabad-gelyana ay hesho, falalka ay sameeneyso waxaa ku badan falaadka iyo wakhti lumiska. Waa howlo ayan jirin ujeeddo ka danbeysa, aan ka ahayn in wiil iyo waayeel leyska baashaalo. In reer Thamuud ay heerkaas gaadheen, iyada oo la xusayo farsamadii guryaha ay buuraha ku naqshadeyn-jireen, Eebe (kor ahaaye) wuxuu inoogu sheegayaa aayadda 149-aad, suuradaa Al-Shucara.
4) Marxaladda afaraad waa marxaladda inta bulshadu ay is-cajabiso ay baarqabyadu u kacaan. Markaas iyaga oo maangaableydii didinaya sidii lo’dii geesaha lahayd, ku durduriyaan xeerarkii Eebe (kor ahaaye). Marxaladdaas, waxaa Eebe u caado ah in uu u kaadiyo oo uusan ganaaxa kula deg-degin. Dad wax u sheega ayaa loo diraa. Intii ehelu-kheyr ah, garashada ayaa u danqata oo faham ayay helaan. Intii qaddartu ay horey ugu dhacdeyse, waa ay madax-adeygaan. Halkaas ayay ku halaagsamaan. Aayadda 52-aad ee suuradda Al-Namal ayaa arintaas inoo sheegeysa.
Af-lagaaddaduu Muuse yidhi amarki beenowye
ununkey ka gooyeen hashii loo ag-joogsadaye
W/Q:C/NAASIR GURAY MEECAAD(ILAAHAY AYAAN WANAAG KAGA RABAA,WIXII AAN QALDAY WAA NAFTAYDA IYO SHAYDAAN,ALLENA HANAGA CAFIY).